ICryptoGator.co yindawo yokuthola izindaba zakamuva ngama-cryptocurrensets afana neBitcoin (BTC) ne-Ethereum (ETH), ubuchwepheshe be-blockchain ngokujwayelekile nezindaba zokuhweba ze-Forex. Siphinde sinikeze ukufinyelela kuzinsizakusebenza kanye nemihlahlandlela yokukusiza ukuthi uzulazule kwi-cryptocurrency kanye ne-blockchain ecosystems, kanye nezimpawu ezizenzakalelayo zokuhweba ze-Forex ongazisetha kanye bese uthola imali engenayo ngokuqhubekayo ngaphandle kokuhweba ngesandla.
Sithumela njalo imihlahlandlela nezinsizakusebenza zokungena emhlabeni wezicelo ze-blockchain, kufaka phakathi ukuthi ungasebenzisa kanjani i-DeFi namanye amapulatifomu we-blockchain asuselwa ku-Bitcoin, i-Ethereum, njll. Siphinde futhi sinikeze ukufinyelela okuzenzakalelayo kwesiginali ye-Forex ekusiza ukuthi udale imifudlana yakho yemali engenayo!
Sijoyine ohambweni olujabulisayo lokuya ezweni lama-cryptocurrensets, ama-blockchains, amapulatifomu we-DeFi, izinhlelo zokusebenza zemithombo yezokuxhumana ezisatshalalisiwe kanye nama-algorithms wokuhweba we-Forex!
Qiniseka ukuthi ubhalisela incwadi yethu yezindaba ukuze ube owokuqala ukwazi ngezindaba zethu zakamuva ze-blockchain, imikhombandlela ye-cryptocurrency kanye namasiginali we-Forex ezenzakalelayo!
Okuqukethwe kwenzelwe ulwazi kuphela, akufanele uthathe noma yiluphi ulwazi noma enye into efana nezomthetho, intela, utshalomali, ezezimali, noma esinye iseluleko. Akukho okuqukethwe kusayithi lethu okubandakanya ukucela, ukuncoma, ukugunyaza, noma ukunikezwa yiCryptoGator.co. Uzothatha umthwalo ophelele wokuhlola ukufaneleka nobungozi obuhlobene nokusetshenziswa kwanoma yiluphi ulwazi noma okunye okuqukethwe ku-cryptogator.co ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinqumo ngokuya ngolwazi olunjalo noma okunye okuqukethwe. Kunezingozi ezihambisana nokutshala imali kuma-cryptocurrensets naku-Forex. Ukutshala imali kuma-cryptocurrensets naku-Forex kubandakanya ingozi yokulahleka nokulahlekelwa yinhloko kungenzeka.
Okwakamuva okuvela ku-Blog
Ukuqinisa ukuvikeleka kwayo kwesaziso enkantolo efakwe yiSecurities Exchange Commission (SEC), uRipple (XRP) uthi oKhomishani babo ababili abakhulumile bakhulume ngokungacaci ukuthi imithetho yezokuphepha isebenza kanjani kwi-crypto. Khonamanjalo, uRipple noBinance babanjwa ku-radar njengamathokheni we-XRP ayisigidi esingu-110 abiza cishe […]
Idatha evela emibonisweni yeDelphi Digital ephethe i-BTC ne-ETH ibinenzuzo enkulu kunokutshala imali kwizilinganiso ezinesisindo semakethe ye-cap crypto nezezimali zezinkomba zeDeFi. Funda kabanzi
I-Bitcoin Outlook: Isimo Esiqhakazile Singahle Siphume Uma Ukwesekwa Kwezobuchwepheshe Okubalulekile Kubambile
Yize umbono wesikhathi esimaphakathi uhlala ungemuhle, iBitcoin ingenza umnyakazo we-bullish ezinsukwini ezizayo uma izintengo zikwazi ukubamba ukwesekwa okungaphezulu kwezingu- $ 29,150 / 28,600 esifundeni. Funda kabanzi
Igama * imeyili * Umlayezo